Ukusingathwa kwePodcast, ukuBambisana, Uhlu Lokuhlola Lokukhuthaza | Martech Zone
Nyakenye bekungunyaka i-podcasting yaqhuma ukuthandwa. Eqinisweni, ama-21% amaMelika angaphezu kweminyaka eyi-12 athe alalele i-podcast ngenyanga edlule, okuyi uye wenyuka ngokuqhubekayo unyaka ngaphezu konyaka kusuka kusabelo esingu-12% ngo-2008 futhi ngibona kuphela ukuthi le nombolo iyaqhubeka nokukhula.
Ngakho-ke usunqume ukuqala i-podcast yakho? Yebo, kunezinto ezimbalwa okufanele uzicabangele kuqala - lapho uzosingatha khona i-podcast yakho nokuthi uzoyithuthukisa kuphi. Ngezansi ngibhale uhlu lwamathiphu nezifundo ezimbalwa ezifundwe ekukhuthazeni i-podcast yethu Emaphethelweni weWebhu, ngakho-ke ngithemba ukuthi zizokusiza kuwe!
I-Podcasting Workshop nokwethulwa
Muva nje ngisungule umhlangano wokufundela ama-podcasters webhizinisi wokuhambisa amasu athile wokuhlanganisa nokukhuthaza ama-podcast abo. Sisebenzise eziningi zalezi zindlela nge- I-Dell Luminaries podcast, ukuyifaka ku-1% ephezulu yawo wonke ama-podcast ebhizinisi.
Ungayibamba kuphi iPodcast Yakho
Ngaphambi kokusabalalisa kunoma yiziphi izinkomba, uzodinga ukunquma ukuthi uthanda kuphi Bamba i-podcast yakho. Ukunquma ukusingathwa kwe-podcast yakho kuzoncika kokuningi lapho ungahambisa khona i-podcast yakho njengoba ezinye izinkomba zinezibopho ezithile nabanye. Kwi-podcast yethu, i-Edge of the Web, siyisingatha neLibsyn futhi ingesinye sezihambeli ezithandwa kakhulu.
Ungabambi i-podcast yakho kumsingathi ojwayelekile wewebhu noma kuwebhusayithi yakho yamanje. Izindawo zokubamba i-Podcast zinengqalasizinda eyakhelwe ukusakaza okukhulu kwefayela lomsindo nokulanda kusuka kuwebhu. Izindawo ezijwayelekile zokubamba iwebhu zingadala ukuphazamiseka kokulalela futhi zingakubiza nemali ngezindleko ezingaphezu kwezingaphezulu ekusetshenzisweni komkhawulokudonsa.
UDouglas uyasingatha Martech Zone Izingxoxo, Ngaphandle kwesiyingi, Futhi I-Veteran Cast nge Fireside, umphathi we-podcast oyingqayizivele onesixhumi esibonakalayo esihle somsebenzisi esifaka phakathi iwebhusayithi kanye ne-podcast yakho. Isayithi libuye linikeze ithoni yezici ezihlukile, kufaka phakathi abaphathi abangenamkhawulo, amaphrofayli wezivakashi angenamkhawulo, izikhangiso ezixhasayo, izixhumanisi zokubonisa, izixhumanisi zokubhaliselwe, amakhasi okwabelana, nesidlali se-podcast se-HTML5.
Ezinye izinkampani ezimbalwa zokubamba i-podcast ongazisebenzisa yilezi:
I-Acast - Ukutholwa kwePodcast, ukulalela, ukusingathwa nokusatshalaliswa kwe-RSS.
Ihange - Dala futhi ubambe iziqephu ezingenamkhawulo, usabalalise umbukiso wakho yonke indawo, futhi wenze imali. Konke endaweni eyodwa, konke mahhala.
I-Audioboom - Finyelela abalaleli abazinikezele futhi uhambise umlayezo womkhiqizo wakho ngokufakwa okukhangayo okunamandla nokugunyazwa okuvela kuthalente eliphezulu ku-podcasting.
I-Blubrry - IBlubrry.com ngumphakathi we-podcasting kanye nesiqondisi esinika abadali amandla okwenza imali, bathole izilinganiso zabalaleli eziningiliziwe futhi babambe umsindo wabo nevidiyo. Noma ngabe ungumqambi wemidiya, umkhangisi noma umthengi wemidiya, iBlubrry iyisixhumi esibonakalayo sakho semidiya.
I-Buzzsprout - Qala i-podcasting namuhla ngokusingathwa kwamahhala kwe-podcast kusuka I-Buzzsprout, isoftware elula kakhulu yokusingathwa, ukukhuthazwa, nokulandelelwa kwe-podcast yakho.
Sakaza - Kusuka ekusingatheni nasekuhleleni kuya ekusebenzeni nasekuhlaziyeni, iCasted iyipulatifomu yokuphathwa kokuqukethwe yabathengisi beB2B ngezwi.
Libsyn - ILibsyn inikeza konke okudingwa yi-podcast yakho: amathuluzi wokushicilela, ukusingathwa kwemidiya kanye nokulethwa, i-RSS ye-iTunes, iWebhusayithi, Izibalo, Izinhlelo Zokukhangisa, Okuqukethwe kwe-Premium, Izinhlelo ze-Apple, i-Android ne-Windows.
Megaphone - Amathuluzi wokushicilela, ukwenza imali, nokukala ibhizinisi lakho le-podcast.
I-Omny Studio - I-Omny Studio yisixazululo sebhizinisi se-podcasting esifaka isihleli online, ukwenza imali, ukusakazwa kokubamba, ukubika, kanye nezinye izinto eziningi.
PodBean - Isixazululo sokushicilela se-podcast esilula kakhulu. Umkhawulokudonsa ongenamkhawulo nokugcina. Konke i-podcaster idinga ukusingatha, ukukhuthaza, nokulandela umkhondo we-podcast yakho.
I-Simplecast - Shicilela ama-podcast akho ngendlela elula.
SoundCloud - I-Podcasting ku-SoundCloud yenza kube lula kunoma ngubani ukuthi axoxe izindaba, alayishe, futhi abelane. Yakha umphakathi wakho kungxenyekazi ezinzile kunazo zonke futhi enembile yokubamba umsindo emhlabeni.
I-Spreaker - USpreaker unakho konke! Setha i-akhawunti yakho bese ulungele ukurekhoda ama-podcast noma ukubamba imibukiso yomsakazo bukhoma kusuka kukhompyutha yakho noma idivayisi yeselula.
I-Podcast Jet - Ukusingathwa kwe-Premium Podcast: Ukulethwa okusheshayo nokusetshenzisiwe.
Ngemuva kokusetha ukusingathwa kwe-podcast yakho, kuzodingeka ube nokuphakelayo okuvumelekile kwe-RSS. Izikhathi eziningi lapho uhlela i-akhawunti yokubamba i-podcast uzolahlekelwa okuthile okuzokwephula okuphakelayo kwe-RSS. Ngaphambi kokuhambisa kunoma iyiphi inkomba, kuzodingeka uhlole ukuze ubone ukuthi okuphakelayo kwakho kwe-RSS kuvumelekile. Ukuhlola okuphakelayo kwakho kwe-RSS, sebenzisa Isiphakeli se-Cast Validator ukubona uma ngabe uwenzile amaphutha. Uma unokuphakelayo okuvumelekile, bese ungena kokuhanjiswa kwesiqondisi sakho.
Ungayihlanganisa kuphi i-Podcast yakho
Qaphela: Ngaphambi kokuhambisa i-podcast yakho kunoma yiziphi izinkomba ezikhona, ngincoma ukuthi ube nesiqephu esingaphezu kwesisodwa se-podcast kokuphakelayo kwakho kwe-RSS. Ungahambisa ezinkomba eziningi nge-podcast eyodwa kuphela, kepha kubalaleli abaningi ku-podcast yakho, bazofuna ukubona okungaphezulu kwesiqephu ngaphambi kokubhalisela uhlelo lwakho.
Ngoba iPhone futhi Android amadivayisi alawula imakethe ephathekayo, lokhu kubhaliswa okubili kokuqala kuyisidingo sayo yonke i-podcast!
iTunes - Ngemuva kokudala okuphakelayo kwe-RSS, ukufaka i-podcast yakho ku-iTunes kufanele kube yisinyathelo sakho sokuqala. ITunes inelinye lamanethiwekhi athandwa kakhulu ngabalaleli bama-podcasters. Uzodinga kuqala ukuba ne-ID ye-Apple, uma usunayo i-iPhone, kufanele ube ne-ID vele. Ngena ngemvume kulokhu iTunes Podcast ikhasi lokuxhuma ne-ID yakho ye-Apple bese unamathisela okuphakelayo kwakho kwe-RSS enkambini ye-URL bese uthumela umbukiso wakho. Ngokuya nge-akhawunti yakho, ingavunywa ngokushesha okukhulu noma kungathatha izinsuku ezimbalwa. Uma wamukelwa ku-iTunes, umbukiso wakho uzovela kwamanye ama-podcatcher amaningi ahlukile ngokuzenzakalela njengoba lawo mathuluzi ethola okuphakelayo kwawo ku-iTunes. Ngeshwa, nge-iTunes, ngeke uthole lutho analytics ehambisana ne-akhawunti yakho.
Bhalisa i-Podcast yakho nge-iTunes
Isiphathi se-Google Podcast - IGoogle ikhiphe ipulatifomu enezibalo ezithile ezivelele zokuqapha ukulalelwa kwama-podcast akho. Ungabona inani lemidlalo, imidlalo ezinsukwini zokuqala ezingama-30, ubude obumaphakathi, bese uqapha ukusebenza ngokuhamba kwesikhathi. Ngena ngemvume nge-akhawunti yakwa-Google, bese ulandela izinyathelo zokuya ku- engeza i-podcast yakho.
Bhalisa i-Podcast yakho ne-Google
Pandora - I-Pandora iyaqhubeka nokuba yizilaleli eziningi futhi isekela ngokugcwele ama-podcast futhi, noma ikwazi ukuyigada.
Bhalisa i-Podcast yakho ngePandora
Spotify - I-Spotify iyaqhubeka nokwanda kokuqukethwe komsindo futhi, ngokuthengwa kwe-Anchor, ithatha inhloso enkulu yokuba nomnikazi. Ngabasebenzisi abaningi, ngeke ufune ukuphuthelwa!
Bhalisa i-Podcast yakho ngeSpotify
Amazon - I-Amazon Music iyisihlobo esisha kodwa ngokufika komsizi wezwi elizwakalayo, uNdunankulu no-Alexa, akufanele ushiye lesi siteshi esibalulekile.
Bhalisa i-Podcast yakho nge-Amazon Music
Ngokuzikhethela, ungabhalisa ne-podcast yakho ngala mathuluzi nezinkomba ukukhulisa ukufinyelela kwakho:
Acast - Noma ngabe i-podcast yakho isingathwe komunye umhlinzeki, ungabhalisa i-podcast yakho nge-akhawunti yokuqala yamahhala.
Faka i-Podcast yakho ku-Acast
AnyPod - I-AnyPod yikhono elidumile lamadivayisi anikwe amandla yi-Amazon Alexa.
Faka i-Podcast yakho ku-AnyPod
I-Blubrry - I-Blubrry futhi iyisiqondisi esikhulu kunazo zonke se-podcast ku-Intanethi, esinama-podcast angaphezu kuka-350,000 asohlwini. Banikeza nokukhangisa kanye nezinye izinsizakalo zabadayisi bezinhlelo.
Dala i-Akhawunti Yama-Blubrry yamahhala futhi ungeze i-Podcast yakho
I-Breaker - I-Breaker iyimakethe yokuthengisa nokuphromotha ama-podcast akho. Uhlelo lwabo lokusebenza luhle impela, futhi lwenza ukuhlanganyela komphakathi kwe-podcast yakho kube lusizo ngokukhethekile.
Xhuma i-Podcast yakho ku-Breaker
I-Castbox - I-Castbox inikeza i-Castbox Creator Studio, iqoqo lamathuluzi anama-robotic podcasting analytics ukuze ukwazi ukukala nokuzibandakanya nababhalisile bakho futhi usakaze futhi unikeze ngokulanda.
Imikhombandlela Ekuhambiseni I-Podcast Yakho ku-Castbox
iHeartRadio - Ukuze IHeartRadio, kulapho kukhokhela khona ukuba neLibsyn njengomphathi wakho. Banobudlelwano ne-iHeartRadio futhi ungasetha i-akhawunti yakho yeLibsyn ukudala ngokuzenzakalela nokondla isiteshi sakho. Ukusetha lokhu, ngaphansi kwethebhu ethi “Izindawo” ku-akhawunti yakho, chofoza ku- “Faka okusha” bese ulandela imiyalo yokusetha ukusakazwa kwe-iHeartRadio. Qaphela: I-podcast yakho idinga ukuthi isebenze isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezimbili ngaphakathi kweLibsyn ngaphambi kokuthi ukwazi ukuthumela ku-iHeartRadio.
Thumela i-Podcast yakho ku-iHeartRadio
I-Overcast - Uma i-podcast yakho isivele iku-iTunes, izovela kungakapheli usuku ku-Overcast. Uma kungenjalo, ungangeza ngesandla:
Ngesandla Faka i-Podcast yakho ku-Overcast
Pocket Casts - Uhlelo lokusebenza olususelwa kuwebhu noluselula olwenza abasebenzisi bakwazi ukuphatha nokulalela kuwo wonke amadivayisi. Thumela i-podcast yakho ngokusebenzisa Ama-Pocket Casts athumela ikhasi.
Thumela i-Podcast yakho ku-Pocket Casts
Podchaser - i-podcast database kanye nokuthola ithuluzi. Inhloso yabo ukwenza kube lula kuwe ukuthi unikeze impendulo mayelana nama-podcast owathandayo futhi uthole kalula ama-podcast. Thola i-podcast yakho kwa-Podchaser futhi ungayibanga usebenzisa i-imeyili ebhalisiwe kokuphakelayo kwakho kwe-podcast.
Funa i-Podcast yakho ku-Podchaser
I-Podknife - IPodknife isiqondisi esiku-inthanethi sama-podcast esenza umsebenzi omuhle wokuhlela ama-podcast ngesihloko nendawo. Abasebenzisi bangabuyekeza futhi bathande ama-podcast abawathandayo. Lapho usubhalisile futhi ungena ngemvume, uzothola isixhumanisi sokuhambisa kumenyu.
RadioPublic - I-RadioPublic yipodcasters yokulalela ye-podcast enempilo, ekhubazekayo, futhi esimeme ngokwezimali ebilindelwe. Sisiza abalaleli ukuthi bathole, bahlanganyele, futhi bavuze abenzi be-podcast — wena. Qinisekisa uhlelo lwakho kuRadioPublic ukuze uqale ukuxhumana nezithameli zakho namuhla.
Funa i-Podcast yakho ku-RadioPublic
Isithungi - Ngokwami, iStitcher uhlelo lwami lwe-podcast engilithandayo. Konke ukulalela kwami ​​kwe-podcast kwenziwa ngalolu hlelo lokusebenza. IStitcher uhlelo lokusebenza lwamahhala olunemibukiso yemisakazo engaphezu kwama-65,000 nama-podcast atholakalayo. Ukuze uthumele i-podcast yakho, kuzodingeka ubhalise njengozakwethu. Izibalo zakho zombukiso ziyatholakala nakuPartner Portal futhi.
Faka i-Podcast yakho ku-Stitcher
TuneIn - I-TuneIn kungenye inkomba yamahhala ongayithumela i-podcast yakho. Ukuze uthumele i-podcast yakho, uzodinga ukugcwalisa ifomu labo. Ngeke ube ne-akhawunti neTuneIn njengoba uzokwenza nezinye izinkomba. Ngakho-ke, uma udinga ukuvuselela noma yini kokuphakelayo kwakho, kuzodingeka uphinde wenze le nqubo. I-TuneIn ibuye ibe ne-Amazon Skill lapho i-podcast yakho ingadlalwa khona ngamadivayisi anikwe amandla yi-Alexa!
Faka i-Podcast yakho ku-TuneIn
I-Vurbl - indawo yokusakaza yomsindo yazo zonke izinhlobo zabadali bomsindo, nanoma ngubani othanda ukulalela umsindo. Sisekela abadali bomsindo ngemodeli yethu yesiteshi futhi sisiza abalaleli ukuthi baxhumane nokuqukethwe okunengqondo abazokulalela.
Funa iSiteshi Sakho se-Vurbl
Yabelana ngama-audiograms ku-Social Media
I-Audiogram - Guqula umsindo wakho ube amavidiyo wokuzibandakanya nawo I-Audiogram.
Isihloko - Dala ama-audiform we-waveform, iziqephu ezigcwele kuvidiyo, ubhale ngokuzenzakalela, futhi uphromothe i-podcast yakho ngamavidiyo amaningi ngendlela ofuna ngayo Isihloko.
Wavve - Wavve ikuvumela ukuthi udale ama-audiograms - amavidiyo anomsindo wakho we-podcast - angabiwa emphakathini ngokusebenzisa isidlali sawo.
Ungayisebenzisa kanjani i-Podcast yakho
Ubuwazi ukuthi i-Google manje ikhomba ama-podcast futhi ibuye iwakhombise ku-carousel kumakhasi wemiphumela yenjini yokusesha? I-Google inikeza imininingwane ngezinyathelo zoku qinisekisa ukuthi i-podcast yakho ikhonjisiwe ku-athikili yabo yokusekela. Ngibhale ukuthi ngingaqinisekisa kanjani ukuthi iGoogle yazi ukuthi unayo i-podcast uma unayo I-WordPress kepha ibamba i-podcast ku-podcast yangaphandle insizakalo yokubamba.
Faka i-Podcast Smart Banner
Amadivayisi we-iOS anekhono lokwengeza isibhengezo esihlakaniphile ngaphezulu kwewebhusayithi yakho kubasebenzisi be-Apple iPhone ukubuka i-podcast yakho, ukuyivula ku-Podcasts App, bese uyibhalisela. Ungafunda ukuthi ungakwenza kanjani lokho kule ndatshana ku Ama-iTunes Smart Banners ama-Podcast.
Kukhona nezinye izinkomba ezikhokhelwayo ongazisebenzisa ukusingatha i-podcast yakho noma usebenzise nje njengenye inkomba. Yize ungahle ungabaze ukukhokhela okunye kwalokhu, ngeke wazi ukuthi izilaleli zakho zilalele kuphi. Ngingancoma ukuthi bazame bonke okungenani unyaka owodwa bese ubona ukuthi hlobo luni lwezibalo ozithola kulezi zinkomba ngaphambi kokukhansela. Eziningi zalezi ziqala nge-akhawunti yamahhala, kepha uzophelelwa yisikhala ngokushesha ku-akhawunti yakho yamahhala.
I-Acast - I-Acast inikeza konke okudingayo ukudala nokwabelana nge-podcast yakho yonke indawo.
I-AudioBoom - I-AudioBoom inika amandla ama-podcasters ukusingatha, ukusabalalisa nokwenza imali ngomsindo wakho.
I-PodBean - PodBean ifana kakhulu neSpreaker njengomphathi we-podcast. Ngokwesipiliyoni sethu, kube nezinkinga ngokungeniswa kokuphakelayo kwethu kwe-RSS ngokuthi ngeke kuhlale kuthola iziqephu zakamuva. Kodwa-ke, kungumbungazi othandwa kakhulu phakathi kwabapodcasters.
I-PodSearch - I-PodSearch inikeza amathuluzi okusesha asebenziseka kalula, kufaka phakathi izigaba, imibukiso ephezulu, imibukiso emisha, namagama asemqoka, ukukusiza uthole ama-podcast ozowajabulela. Bhalisa lapha.
I-SoundCloud - SoundCloud ingenye yezinkomba ezintsha kakhulu i-Edge ye-Web Radio ekuyo ne-akhawunti yethu ye-Libsyn, sikwazile ukuvumelanisa ngokuzenzakalela lezi zinto ndawonye futhi ukwenziwa kwe-akhawunti kwakulula kakhulu ngeLibsyn.
Spreaker - I-Spreaker Ungumbungazi othandwayo, ikakhulukazi phakathi kwama-podcasters afuna ukusakaza bukhoma. Banomdlali omuhle ozokuvumela ukuthi usakaze bukhoma futhi ufake kungobo yomlando isiqephu ngasinye salabo abaphuthelwe ukusakazwa bukhoma.
Nginesiqiniseko sokuthi kukhona abanye, kepha lezi yizinkomba esizisebenzisayo I-Edge Media Studios yamakhasimende ethu okukhiqiza ama-podcast. Uma unezinye okungenzeka ngiphuthelwe zona, qiniseka ukungazisa kumazwana angezansi!
Abadlali bewebhu bePodcast
Iwijethi yebha eseceleni yeWordPress Podcast - noma ngabe iphethwe kuphi i-podcast yakho, ukuyifaka kusayithi lakho kuyindlela enhle yokuthola abalaleli abafanele. I-WordPress Podcast Sidebar ivumela zombili iwijethi noma i-shortcode ukushumeka konke okuphakelayo kwe-podcast (ngesidlali) noma kuphi kusayithi lakho.
Jetpack - I-WordPress 'premiere plugin yokuthuthukisa isiza sakho manje ine-podcast block ongayengeza kokuqukethwe kwakho okuzakhela i-podcast player ngokuzenzekelayo.
Nawa amanye ama-plugins akhokhelwayo azobonisa ama-podcast akho kahle ngaphakathi kwe-WordPress.
I-plugin ye-MP3 Sticky Player WordPress
I-plugin yeRoyal Audio Player WordPress
Inqwaba ye-HTML5 Audio Players WordPress Players
I-plugin ye-Easy Audio Player WordPress
I-Sonaar MP3 Player WordPress Plugin
Ungakhohlwa indima ebalulekile engadlalwa yimithombo yezokuxhumana ekukhuthazeni ama-podcast akho, amasha namadala! I-Twitter, i-Facebook, i-LinkedIn, i-Instagram… ngisho ne-Google +… konke kungakusiza ukuthi ukhulise izithameli zakho futhi ushayele abalaleli abaningi nababhalisele okuqukethwe kwakho.
Ngethuluzi lokuphathwa kwezokuxhumana komphakathi njenge I-Agorapulse, ungabeka umugqa amasheya kuwo wonke lawo maphrofayli kalula, futhi usethe amasheya aphindaphindayo kulawo ma-podcast ongawathatha njengehlala eluhlaza. Noma, uma usebenzisa ithuluzi elifana ne- FeedPress, ungashicilela ngokuzenzakalela i-podcast yakho kumaphrofayela wakho wezokuxhumana ngokuzenzakalela.
Njengoba ukhulisa izithameli zakho kulawo mapulatifomu, abalandeli abasha kungenzeka ukuthi abawabonanga ama-podcast akho amadala, ngakho-ke leyo yindlela enhle yokwandisa ukubonakala. Okubalulekile ukudala okuthunyelwe kwemithombo yezokuxhumana okubandakanyayo, kunokuba kube ukusakazwa kwesihloko sakho se-podcast. Zama ukubuza imibuzo noma ukufakwa kuhlu kokuthatha okuyinhloko. Futhi uma uxoxile noma usho omunye umkhiqizo noma umthelela, qiniseka ukuwamaka kuzabelo zakho zenhlalo!
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo kulokhu okuthunyelwe ukuthola eminye imikhiqizo.
Tags: acastumculo we-amazonnoma iyiphiaudioboomamabhlogoibhodicastroabezindaba onqenqemeniizitudiyo zabezindaba ezinqenqemeniisiqondisi se-epodgoogle ukudlalaiheartradioitunesJetpacklibsynUkumaketha i-Podcastizingxoxo ze-martechPodbeanizinkomba ze-podcastisiqondisi se-podcastokuphakelayo kwe-podcastukusingathwa kwe-podcastamamethrikhi we-podcastukukhuthazwa kwe-podcastukuhlanganiswa kwe-podcasti-podcastingi-podchaserumabhebhanaisethuloSoundCloudphakamisai-spreakerumthungithumela i-podcast yakhoukuhlanganisatuneinvurblwavvekuphi ukusingathakuphi ukukhuthazakuphi ukuthengisaWordPress
UTom Brodbeck uyi-Senior Digital Strategist & Digital Team Lead eHirons, inkampani yezentengiso egcwele e-Indianapolis. Isipiliyoni sakhe besigxile ku-SEO, ukumaketha kwedijithali, ukumakethwa kwewebhusayithi, nokukhiqizwa komsindo / ividiyo. Ubuye wabonakala nakuSocial Media Namuhla nakuSesha Injini Yezindaba.
Ungawusungula Kanjani Ngokushesha Umkhankaso Osuselwa Esimweni Sezulu Ongenawo Amakhono Wokubhala
Iqembu Lobuciko Lalakha Kanjani ikhadi Lamaphuzu Eliphethe Ukukhombisa Inani Lalo Ku-C-Suite